Par Taratra sur 23/04/2019
Vita ny tohodrano vaovao ao amin’ny kaominina Antsampanana, distrikan’i Brickaville, ahafahana manondraka tanimbary 140 ha. Ny “Audit Tetikasa Fararano”, novatsian’ny Vondrona Eoropeanina vola nahafahana nanangana ny fitodrafitrasa niarahana tamin’ny ben’ny Tanàna Antsampanana, Rahavana Eugène Arthur.
Nangatahan’ny ben’ny Tanàna ny teknisianina hanoro ny fomba fampiasana izany, indrindra ny fiarovana izany tohodrano izany ho tombontsoan’ny rehetra hampitombo ny voka-bary. Vonona ny tantsaha mpamboly hampiasa azy hanatanteraka izay tanjona hanatsarana ny famokaram-bary any aminy.
Nanolotra 4 tapitrisa euros ny fitondram-panjakana alemaina amin’ny alalan’ny GIZ (Agence de coopération internationale allemande pour le développement) ho an’ny tetikasa Perer II na famatsiana herinaratra azo avaozina any ambanivohitra (Promotion de l’électrification rurale pour les énergies renouvelables). Tanjon‘ny fitondrana ankehitriny ny hampitombo 50 % ny ny mponina hahazo famatsiana herinaratra. Fanirian’ny GIZ kosa ny hampisy tontolo milamina hamparisika ny mpampiasa vola. Ny Perer I, nahitana fahombiazana amin’ny herinaratra ahazoana mitrandraka vaovao sy mampiasa fitaovana samihafa.
Homen-danja ny “Vita Malagasy”, nandritra ny fampisehoana fampiroboroboana ny varotra sy ny asa tanana ao amin’ny Tahala Rarihasina, Analakely. Hita any amin’ny faritra maro ankehitriny ny asa tanana « Vita Malagasy », manana ny mampiavaka azy manokana sy manome lanja ny mpanao azy sy i Madagasikara. Nambaran’ny tompon’andraikitra tamin’ny fampisehoana fa ny fividianan’ny mpanjifa izany mijanona amin’ny maha vita malagasy azy no betsaka. Mbola vitsy ny mividy izany noho ny hatsaran’ny kalitaony. Koa hanaporofoana izany, nametraka fenitra io mpandraharaha io amin’izay vita avy eto Madagasikara.